ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဖွဲ့ဝင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 17 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
လိမ်လည်သူများကိုနည်းစနစ်အစက်အပြောက်ဖို့ပိုပြီးအဆင့်မြင့်နှင့် ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာကြပြီ. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သူတို့ကိုပယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်နေလုပ်နေ.
ကျနော်တို့အဘို့အ Anti-လိမ်လည်သူများကိုနည်းပညာကို Scamalytics သုံးပြီးပြီ2ယခုအနှစ်. ဒီ tool ရှယ်ယာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စက်မှုလုပ်ငန်းဖြတ်ပြီးလိမ်လည်သူများကိုအချက်အလက်များနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမော်ဒအစက်အပြောက်လိမ်လည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကူညီပေးသည်နှင့်သူတို့ပင်ငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါထိခိုက်မီက DateMyPet.com မှသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ. Scamalytics လည်းလိမ်လည်သူများကို Auto-ကို detect နှင့် bot တွေဟာဖယ်ရှားပေး, အဖြစ်ကလူ့မျက်စိမမြင်နိုင်ကြောင်း 'အပါးပျဉ်းအောက်တွင်' 'သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းပေးအပ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် In-အိမျတျောကိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သာကုမ္ပဏီတဝတည်းဖြစ်ကြ၏, ဖြည့်ညှင်းနှင့်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားအဖွဲ့ဝင်ထောက်ခံမှုအသင်းများနှင့်အတူ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ 60 အလုပ် 24 နာရီတစျနေ့, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်, 365 လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်မှာငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါမှ In-အချိန်ဇုန်စောင့်ရှောက်မှုပေးရက်ပတ်လုံးတစျနှစျ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားဖြည့်ညှင်းအဖွဲ့မျက်နှာပြင်တင်သွင်း profile များကိုအတည်ပြုပေးရန်လုံးကိုအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုစစ်မှန်သောများမှာ. ဒီဓါတ်ပုံတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကပါဝငျ, profile များကို, ဒိုင်ယာရီ entries တွေကို, အဖွဲ့ဝင်ခြေစစ်ပွဲစံတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်သေချာစေရန်ဗီဒီယိုများနှင့်ကနဦးပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျ.
အများဆုံးအောက်မှာဖြည့်ညှင်းကြိမ်စောင့်ရှောက်ရန် 10 မိနစ်ပစ်မှတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်ညှင်းအဖွဲ့သည်မိမိတို့အပြောင်းကုန်ပြီတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုချက်အကြိမ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာရှိ. ဖြည့်ညှင်းကြိမ်လက်ရှိအချိန်တွင်တစ်ဦးအထင်ကြီးမှာ 7.5 မိနစ္မ်ား!
အဖြစ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအရည်အသွေးမြင့်မားဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုပေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့လည်းချိန်းတွေ့နည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်, နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်အတူရုန်းကန်သောသူဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအတွေ့အကြုံအွန်လိုင်း daters နေသောအဖွဲ့ဝင်များ၎င်းတို့၏ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံထဲကအများဆုံးရရန်ကူညီ.
အခမဲ့ JOIN >